Ihe a na - akpọsa n’akwụkwọ n’akwụkwọ
Unu nọ ebe a:Ụlọ > Products > Security > Ụdị:>Ụbọ a na - akwụ n’akwụkwọ
Aha: Robert Zhao
Ebe imeelụ: sales@argger.com
Ngosi ebe East industrial Zone, Anping, Hebei, China
IHE NDỊ MMADỤ IHE NDỊ NA - ENYE
Ụbọ a na - akwụ n’akwụkwọA na - esi n’akwụkwọ a na - enweghị ntị nke 304, 316, 304L, 316L. Ụbọd abụọ ndị bụ́ isi nke e ji ígwè na - enweghị ntị bụ 7 × 7 na 7 × 19, na a na - enyekwa 1 × 7 na 1 × 19. Ụkwụ a na-ala anya bụ 90 °. Ọtụtụ ndị ahụ apụghị imebi aka n’ihi na ọ dị mfe. Ọ gaghịkwa emerụ ụmụ anụmanụ na nnụnụ ahụ́. N’ihi ya, a na - eji ya eme ihe nile dị ka ihe ndị na - enweghị ntị iji chebe anụmanụ, ọ pụkwara ime ka ndị ọbịa ahụ ghara inwe anụmanụ na - enweghị ihe ize ndụ. E wezụga nke ahụ, a na - eji ya eme ihe dị ka ọkụ n’akwụkwọ nnụnụ mee ka nnụnụ dịrị ndụ n’ụzọ dị mma.
Ụzọ Ụbọchị Mmadụ
Ndesịta nke Ọbụkwụ
Ebe a na - eme ka a na - eme ka a na - eme ihe dị iche iche n’ihe ndị na - esonụ:
LỊdị ihe dị iche
LỤzọ nchekwa kechi
N’ịbụ ebe dị n’elu, a na - eme ka a na - ezere ndị mmadụ na ụmụ anụmanụ n’ụzọ dị irè. Tụkwasị na nke ahụ, mmetụta a na - eguzosi ike n’ụzọ dị ukwuu, ya bụ, ọ pụrụ inyere ụmụ anụmanụ ndị a kpọrọ ihe n’aka ma belata imebi ada ada.
LAgbụgbo dị ukwuu
E mere n'àgwà dị elu akpụ AISI 304 ma ọ bụ AISI 316, Ebe a na - eme ka a na - akwụsị n’ahụ́ anyị nwere owuwu a na - apụghị egbu n’iyi maka inye mmetụta dị ukwuu na ọgụgụ ọgụ. Ọ na - eguzogide ịnyịnya n’ahụ́ nke ọma, o nwere ike ibu ibu snow dị arọ. Ka ọ dịgodị, o nwere ike iguzogide ịkpọ anụ na ụkwụ ndị ọzọ na - akpata ihe na - ebibi.
LIhe ndị a na - eme n’aha
Ọnụ ọgụgụ ndị dị n’otu rhombic na - eme ka a ghara ịna - egbu onwe ya dị elu n’enweghị ihe a na - ahụ anya. Ọdịdị ya mara mma na ụlọ ya na - adịgide adịgide na - eme ka ndị na - ede ogige na ndị na - eme ihe n’ụwa nile na - eji ya akpọrọ ihe karị.
LOgologo ndụ dị ukwuu
Ikel a na - akwụsị n’ụzọ dị ịrịba ama ka igwe n'okpo nke ahụ o nwere ike ịnagide ọnọdụ kasị siri ike dị ka mmiri siri ike, Ọbụna ifufe oké snow. Ọ na - enwekwa ọgụgụ dị ukwuu n’agbanyeghị UV, nnukwu na nzọta nke na - eme ka e nwee ike ịdị ogologo ndụ karịrị afọ 30. Ka ọ dịgodị, a na - enweghịkwa ihe a na - eme ka a na - eme ka a ghara ịna - eme ka a na - eme ka a na - eme ka a na - eme ka a ghara ịna - eji ọcha pụrụ iche.
E wezụga nke ahụ, a na - enye cable n’akwụkwọ a na - enye nke ụlọ ọrụ anyị bụ enyi ebe a na - enyi, a na-adịghị ewu na a ga - emeghachi ya. Tụkwasị na nke ahụ, a na - eme mgbanwe na-ekwe ka a na - akpụ n’elu n’efu na mgbapụ maka n’ụzọ dị mfe na ịnyịnya.
Ụdị ịdọpụta ụgbọ mmiri a na - anwe
Ndesịta ozi ndị ahụ:
A kpọrọ aha: a na - eme ka a na - eme ka a na - akwụsị ụdị egwú.
L akụkụ cable: akụkụ AISI 304, 304L, 316 ma ọ bụ 316L.
L Cable owu: 7 × 7 (1.5 mm, 2 mm ma ọ bụ 2.5 mm), 7 × 19 (3 mm, 4 mm)
L Cable diameter: 1/8 ", 3/32", 5/64 ", 1/16" na 3/64.
L Mesh ụhara mmeghe: 1 "× 1", 1-1 / 2 ", 2" × 2 ", 3" × 3 "na 4" × 4 ".
L Standard mesh anghy: 90 °.
L Mesh: W: 20 mm ruo 120 mm; H: 20 mm ruo 120 mm.
Ochie:Ụbọbọ ụgbọ n’ahụ́ n’ahụ́
Mwagụ̀ rope mesh, stainless steel knotted rope mesh, knotted cable mesh,
Ụzọ iji gbochie ihe a na - emebi n’akwụkwọ
Igbo NdụA kọ́ntịKa e wee mee ka cable a na-akwụkwọ enwe àgwà ndị ka mma na ndụ n'oge ogologo, n'ịchịkwa ya na ịchọpụta ya, anyị aghaghị inweta ụzọ ụfọdụ iji gbochie mbibi nke e bibiri kable. A tụnyere...
Ogologo oge aṅaa ka a na - eji ụgbọ ígwè eme ihe n’ahụ́ e ji eme ihe?
Dị ka akụkụ nke iji ndụ, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ebe gburugburu,Mmadụ a na - akwụ ụkwụNa - enwe mmetụta dị nnukwu, dị ka ụgbọ mmiri Zoo, nchebe ụgbọ mmiri, nchebe dị elu, ọkụkụ a na - arị n’ahụ́, nr., nke a n...
Olee otú ị ga - esi zụta ụgbọ mmiri dị mma?
Ọtụtụ ndị na - eji eme ihe ga - atụle otú ha ga - esi họrọ onye na - emepụta akụkụ ahụ mgbe ha na - ahọrọ akpụkpọ ụkwụ. Nye ndị ahịa bụ́ ndị ahụmahụ azụ, ọ dịghị esi ike ịzụ akụkụ akụkụ, ma ọ na - esi...
ỤbọchịE ji Q235 nke dị elu n'obi a na - enwe uwe a na - akwụsị n'ime ya site na "mkpụrụ" welding. Ọ bụghị nanị na ụgbọ mmiri ndị a na - eme n’ahụ́ n’ahụ́, kama, e nwere nwekwara ikesa otu ụgbọ mmiri.Ọ...
Gbasara iji ụbọba
Ụdị ụda mpịbà dị mgbagwoju anya, n'ezie, iji ụbọbụ ụbụrụ eme ihe dị nnọọ ukwuu, ebe, ka anyị kwuraỤtọ mpụ, Ka anyị lekọta ọnụ!1. A pụrụ iji ihe a na - akpọ ígwè n’akụkụ ọkụ n’ala ma tinye n’ala. N’ọnọ...
Gịnị mere a ga - eji ojii?
Ọtụtụ ụgbọ a na - akpọ akụkụ akụkụ, karịsịa site n’ihe ndị a na - enyocha akụkụ ahịhịa, Akwụkwọ a na - enweghị ntị bụ ihe atọ, iron, nickel, chromium, dị ka akụkụ dị iche iche nke mmepụta, Mgbe ahụ, a...
Ụzọ Dị n’Ebe Ụzọ Dị n’Ebe Ụzọ n’Ebe Ụtọ
A na - akụkụ akụkụ ígwè a na - enweghị ntịỤtọ mpụA na - esi n’akwụkwọ a na - enweghị ntị nke 304, 316, 304L, 316L. Ụbọd abụọ ndị bụ́ isi nke e ji ígwè na - enweghị ntị bụ 7 × 7 na 7 × 19, na a na - en...